Miraha | December 2019
Ugu Weyn Ee Miraha
Lychee: Waxyaalaha kalooriga, halabuurka, faa'iidada iyo waxyeelada
Miraha khafiifka ah ayaa sii kordhaya nolosheena. Haddii horay aan ugu qanacsanahay miraha qasacadaysan ("tropical cocktail", "canjeera casiirkeena", iwm.), Hadda dukaamo kasta oo aad si sahal ah uga iibsan kartaa miro cusub oo ka soo baxa dhamaadka kale ee meeraha. Indhaha oo kala firdhaan - waxay soo bandhigaan dhadhanka kuleylka ah ee isku dhejiska leh ee leh midabyo badan, midab, noocyo kala duwan.
Sida loo qalajiyo tubada guriga si loo ilaaliyo guryaha faa'iidada leh
Mashiinka aadka loo cuno waa mid aad u caan ah oo wax lagu karsado oo u wanaagsan caafimaadka. Si kastaba ha noqotee, marka la iibsanayo miraha la qalajiyey, ma jiro wax hubaal ah in aysan jirin wax ilaalin ah, sunta cayayaanka iyo kiimikooyinka kale, oo aysan jabanayn. Xilliga xagaaga, qiimaha dalagyada cusub ma aha mid aad u sarreeya, markaa waxaan ogaan doonaa sida loo doorto habka saxda ah ee loo qalajiyo iyo sida si habboon loogu keydiyo qoyaanka guriga.
Banana: imisa kalori, waxa ku jira, waxa wanaagsan, ee aan cuni karin
Banana waxaa laga heli karaa qalabka wareegga sanadka oo dhan, iyada oo ah mid aan qaali ahayn, dhadhan fiican leh oo caafimaad leh. Waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya cuntada fudud iyo macmacaan macmacaan, laakiin sidoo kale ujeedooyinka quruxda badan, ee ku saabsan dadka yar yar. Aan fiirino soo dhaweyn sheyga. Calorie iyo qiimaha nafaqada Dhalinyarada, ciyaartoyda muuska waxaa loo tixgeliyaa cunto fudud oo dhamaystiran, dhammaantoodna qiimaha nafaqada oo kordhay.
Kiwi - mid ka mid ah miraha qalaad ee ugu faa'iido badan, taas oo sidaas u timid inay dhadhamiyaan badan. Waxay leedahay qiime nafaqo oo sarreeya, dhadhanka aan caadiga ahayn iyo dhadhanka asalka ah ayaa ka helay codsiyo balaadhan oo laga sameeyay culuumta culimada. Si kastaba ha ahaatee, faa'iidada ugu weyn ee kiwi waa hantida faa'iido leh, oo aan ku qeexnay maqaalkan.
Waa maxay salak, faa'iidooyinkeeda iyo sida loo isticmaalo
Kuwa nasiib u leh inay booqdaan Thailand ugu yaraan hal mar waxay ogtahay sida xulashada kala duwan ee miraha ugu quruxda badan dalkan uu u soo bandhigo dadka deggan. Maxay yihiin noocyada caanka ah ee loo yaqaan 'durian, jackfruit, miro masduulay, maprao, shompu, guava, lychee, longan, mangosteen, noi-na, rambutan, santol, sapodilla ama tamarind!
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Miraha 2019